Mudane Axmed Maxamed Muxamud – Somaliland First
U Hiili Magaaladada & Qarankaba
Hawlgalka U Hiili Magaladada
Macadka Indheergaradka Somaliland
Waxaan ixtiraam farobadan kuugu hayna halgankii dheera eed dib u xoraynta dalka aad u soo gashay iyo hirgalinta mashaariic waawayn oo horumarka dalkeena curdinka ah lafdhabar u ah.
Mudane Madaxwayne, waxaa taariikhda ku markhti furaysaa adiga oo dhawraya wada jirka dadka iyo dalka Somaliland in aad doorashaeii Madaxtooyada aad 80 cod uga tanasushay.
Haddaba, Mudane Madaxwayne waxa kaa codsanaynaa in aad nala qaadataan fulinta qodabada DAN-QAN (Somaliland-First) ka kooban yihiin. Fikaradani oo ka turjumaysa danta dadka iyo dalka Somaliland.
Mudane dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta Somaliland oo lagu magacaabo DAN-QAN (Somaliland-First), kuwaasi oo isku hawla kana baaraandagay isku dubaridka Talooyin dhaxalgal u noqda aayatiinka Somaliland.
Muhimadda ugu wayn ee Talooyinka Somaliland-First waxay horseed u yihiin:
In dalka Somaliland helo Aqoonsiga caalami ah
In muwaadiniinta Somaliland noqdaan shicib midaysan, isna aaminsan oo ay ka go’an tahay horumarka dalkooda, meela uga soo wada jeeda cadawgooda.
In dalka Somaliland noqdo mid si dhab ah ay u wada leeyihiin muwaadiniintiisu, sidoo kale in muwaadiniinta Somaliland si buuxda u helaan Cadaalad, Nabadgalyo iyo Barwaqo waarta
Marwo, dhaq dhaqa DAN-QAN (Somaliland-First) waxay ka kooban yihiin Muwaadiniin iyo Aqoonyahano reer Somaliland ah, oo jecel inuu dalkoodu helo isbadlkaasi kor ku xusan, kaasi oo guud ahaan shacabka Somaliland gudo iyo dibada ay si buuxda u tageersan yihiin Talooyinka wax ku oolka ah ee DAN-QAN (Somaliland-First).
Sidaasi darteed, Marwo waxaan kaa codsanaynaa in aad tageertid, nagana hawl gashid sidii sharciyada lagu hirgalinayo Talooyinka DAN-QAN (Somaliland-First) u hirgalin lahayd.
Hirgalinta DAN-QAN (Somaliland-First) waxaay u bahan tahay aqoonyahano dacad ah oo aaminsan fikrada ay xambarsan tahay aragtidani. Waxaanu diyaar idiin la nahay in aanu idiin kala shaqayno hirgalinteeda.
Qoraalkan ayaa sidoo kale laga heli karaa: English
Hawlgalka Kacdoonka Dan Qaran
Dhiirigalinta iyo adkaynta wadajirka iyo midnimada dadka Reer Somaliland iyadoon loo eegin qabiil ama xisbi, dib-u-habeyn ku samaynta hannaanka dawladnimo ee Somaliland iyada oo loo marayo doodo furan iyo wada-hadallo u dhexeeya dadweynaha iyo Akhri Dhammaan